Dawladda Somaliya oo sheegtay in Shabaabku isku buuranayo Baydhabo, ayna ciidanka dawladdu ku sii jeedaan magaaladaasi. – Radio Daljir
Dawladda Somaliya oo sheegtay in Shabaabku isku buuranayo Baydhabo, ayna ciidanka dawladdu ku sii jeedaan magaaladaasi.
Berdaale, April 30 – Saraakiisha hoggaaminaya ciidamada dawladda ee gaaray magaalooyin ka tiesan gobolka Bakool oo ay xalay ka baxeen ciidamada Al-shabaab ayaa sheegaya inay ku sii jeedaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Xildhibaan Ibraahim Kishbuur oo la socda ciidankaasi ayaa goor dhawayd u sheegay Daljir inay ciidanka dawladdu ay isku ballaariyeen deegaanno badan oo ka tirsan goballada Bay iyo Bakool ayna ku sii jeedaan magaalada Baydhabo oo ah magaalada ugu wayn ee ay kooxda Al-shabaab maamusho marka laga hadlayo Bay, Bakool iyo Gedo oo kulligood dhaca Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa uu xildhibaanku sheegay in shabaabku isku aruursanayo Baydhabo si ay isaga difaacaan ciidanka dawladda balse ayna taasi u suuragali doonin.
Boqolaal ka tirsan ciiadamada Xarakada Al-shabaab ayaa maanta lagu arkayaa magaalada Baydhabo kuwaas oo la sheegay inay isu diyaarinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidamada dawladda Federaalka, oo indhawaalaba tiigsanayay guulo ballaaran oo ay ka soo hoynayeen dirirta ay kula jiraan xarakada Aslhabaab oo tan iyo goor dhawayd ka tilinaysay inta badan koonfurta Soomaaliya.
Haddii ay Alshabab lagala wareego magaalada Baydhabo oo ay haysteen tan iyo dhammaadkii 2009-kii, waxa ay noqonaysaa guul-darradii ugu wayneed ee ay ka mutaan dagaallada.